Kuwedzera Kufambisa mune Vakaremara Vanhu vane Mota Adaptive Midziyo
Kukunda a kuremara zvakaoma pakutanga uye izvi zvinobva pane zvakaitika kwauri. Paunoita kugadzirisa, kuita mabasa ezuva nezuva kunova kwechipiri hunhu. Netekinoroji nyowani iripo, zvakawanda zvisingakwanisike zvekare hazvisisina kukwana.
Iyo tekinoroji nyowani inogona kukupa rusununguko kana uchimhanyisa akajairwa mameseji kana kunyange kuita rako rakajairika basa. Zvino kana iwe uine muganho wepanyama, haufanire kungomirira wakakomberedza yako kuremara cheki, iwe unogona kuramba uchishanda nekugadzirisa kudiki uye izvi zvinongogonesa kuzviremekedza kwako.
Ikozvino kune michina inogadziriswa yemota inogadzira iyo yemuviri remara kuzvimirira zvakanyanya. Kupinda nekubuda mumotokari izvozvi kwave nyore uye vanhu vakaremara vanogona ikozvino kutyaira vega.
Semuenzaniso minivan inogona kugadzirwazve kuisa zvinotevera zvinhu:
Iyo yepasi pasi kubva pamberi pechikamu chekutanga chemutyairi uye mapasipoti evatambi kuenda kumashure zvigaro zvebhenji, magetsi emagetsi akapetwa-kunze ramp uye zvakare emagetsi auto-kupfugama michina yakadzikira inotsvedza musuwo sill padivi remutyairi iyo inobvumidza nyore-kunze kumberi chigaro mutasvi uye mutyairi chigaro icho chine pasi pechikochikari cheye spare tareya yekuchengetera nzvimbo.
* Peta kunze ramp kuseri kwemotokari.
* Mutyairi anoshandisa michina yekusimudza iyo inodzora mukova nekubuda kwengoro ine mota. Iyi michina inogadziriswa inobvumira avo vakaremara kuti vafambe zvakanaka mumotokari yavo.
Inochinjika kumutyairi, zvisinei shanduko dzinoratidza wiricheya matambo ekusimudza uye zvishandiso zvekutyaira zvemakomputa.
Zvimwe zvekushandisa zvinosanganisira kutyaira zvinobatsira, kusimudza uye kurodha zvishandiso pamwe neiyo assertive tekinoroji. Izvi zvinobatsira kutyaira kuti mutyairi arambe achidzora zvizere pamotokari yavo uye zvinosanganisira michina inoita kuti mutyairi agadzikane uye kugadzirisa kune kugona kwemutyairi.
Mawiricheya uye masikoti anogona kutakurwa zviri nyore nemagetsi ekusimudza uye kurodha zvishandiso. Iwe unogona zvakare kutora vatakuri kubatsira vatyairi kana vafambi kuti vapinde nekubuda mumotokari zvakachengeteka.
Mota uye Mobility
Shanduko pamushini wekurima kana michina yekumaindasitiri zvakaenzana zvakakosha mumotokari yezuva nezuva. Kurambidzwa kunoita kuti vanhu vatende kuti havagone kuita basa risiri rechokwadi. Vashandi vanogona kutora mukana wekusimudza kupinda nekubuda mumotokari uye kushandisa madhiraivhira ekudzora michina. Pfungwa yakafanana, mamiriro akasiyana.
Zvishandiso zvekubata zvinhu, matarakita, zvishandiso zvemusangano, zvipfuyo zvepurazi uye zvipfuyo zvemumba, kufambiswa kwekunze, kana maATV anowanzo kuve anokwanisa kushandiswa nevanhu vakaremara. Zvinogona kusatombonzwa senge kuremara mushure mechinguva.
Gamuchira izvo tekinoroji inofanira kupa. Mhanya nenzira dzakasununguka kana tenderera kupurazi paunowana. Izvo zvinogona kuitika mazuva ano.